Daroka Baomba Tao Bahrain: Ankamantatra Tsy Voavaha Miafara Amin’ny Fanamelohana Ho Faty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2015 5:20 GMT
Karranah, Bahrain. 15 Febroary 2014 — Fifandonana vaovao rehefa nandady tao amin'ny Fihodinana Pearl ireo mpanao fihetsiketsehana. Nanao diabe tao amin'ny Fihodinana Pearl izy ireo, izay nakaton'ny mpitandro ny filaminana telo lasa izay. Naparitaky ny polisy tamin'ny baomba mandatsa-dranomaso ny vahoaka. Sary avy amin'i Sayed Baqer Alkamel. Copyright: Demotix
Fanontaniana mampitsangam-bolomaso hatrany no mihantsy ny fitokisana ny governemanta ao Bahrain isaky ny misy ny fanambarana ireo karazam-panafihana ny mpitandro ny filaminana. Tao anatin'ny volana vitsivitsy izay, nanambara ny fisian'ireo fanafihana maromaro tamin'ny baomba natao tanana izay nikendry ireo polisy mpanao fisafoana am-perinasa ny Minisitry ny Atitany. Niseho tao an-tanàna kely antsoina hoe Karranah, ao amin'ny Lalamben'i Budaiya, andrefan'ny renivohitra Manama ny tranga vao haingana indrindra.
Nilaza ity fanambarana avy amin'ny Ministeran'ny Atitany tamin'ny 28 Aogositra ity fa polisy iray no maty nandritra ny daroka baomban'ny “mpampihorohoro” tao Karranah :
Polisy iray no namoy ny ainy tamin'ny daroka baomban'ny mpampihorohoro tao Karana.
Tao amin'ny Twitter, nihantsy ny minisitera i Bubahrain mba handefa ny lahatsarin'ny fanafihana ho hitam-bahoaka.
Misy kamera fitsikilovana miraikitra eo amin'ny Araben'i Budaiya, manomboka eo amin'ny fihodidina hatrao amin'ny faritra Budaiya. Azon'ny minisiteran'ny atitany alefa ve ny lahatsary mba hijrenena izay nametraka ny baomba?
Bahrainmomo nisioka tamin'ireo mpanjohy azy 39k fa misalasala raha ny fipoahana no nitranga voalohany.
Nitombo ny isan'ny daroka baomba satria nandefa andian-tafika hiady ao Yemen ny governemanta. Ka isaky ny misy maty ao, misy ny zavatra foronina eto mba hiampangana ny mpanohitra.
Alya Radhi nanampy hoe:
Taorian'ny fipoahana tao Koety, nozaraina tamin'ny sary sy horonantsary ny sarin'ny fipoahana, ireo naratra sy ny maritiora. Nahoana no tsy nahita izany tamin'ny fipoahana tao Karranah isika?
Nilaza ny tsy fisiana babangoana mangotatana ny fitokisana ny governemanta ny kaonty Twitter KarranahNews, izay manana mpanjohy 62K.
Eo antampon'izany izahay dia mitaky sampam-panadihadiana tsy miandany (mba hanadihady) ny fipoahana, tsy matoky ny tantara lazain'ny fitondrana manohitra ny tanora sy ny vahoaka izahay. Fitondrana mitanila io.
Nanozongozona an'i Bahrain ireo hetsi-panoherana goavana ho amin'ny fanavaozana ara-politika nanomboka tamin'ilay antsoina hoe Lohataona Arabo niainga tao Tonizia ka hatrao amin'ireo faritra hafa ao amin'ny tontolo Arabo. Voaràra hatrany ireo hetsi-panoherana goavana milamina nameno ny arabe hatramin'ny nanoheran'ny mpanohitra ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny Desambra 2014. Fihetsiketsehana madinika isak'alina no hita tao amin'ireo faritra fonenana ankehitriny. Mazava ho azy, mety ho hita na aiza na aiza ireo mpanakorontana te hamadika ny fitroarana milamina ho fihetsiketsehana mahery herisetra. Ka mijanona ho ankamantatra na tena nisy na tsia izany daroka baomba izany manoloana ny tsy firaharahian'ny governemanta ny antso hamela solontena iraisampirenena hanokatra fanadihadiana amin'ny fahafatesan'ireo polisy.
Amin'izany toe-javatra izany, nahazo tsiny ny minisiteran'ny Atitany noho ny fitongilanany miharihary manoloana ireo niharam-boina tamin'ny krizy ara-politika izay miotrika manimba ny filaminana ao amin'ny firenena. Fotoana fohy taorian'ny fipoahana, nanambara ny fisian'ny fisamborana maro ny minisitera.
Ahmed Alsaffar naneho hevitra hoe:
Taorian'ny 24 ora, olona maherin'ny 20 no efa noahiahiana!! Roa taona mahery hatramin'izao, mbola tsy voasambotra ny namono ilay maritiora Ahmed Ismail.
[Nisy namono i Ahmed Ismail raha naka sary ny fihetsiketsehana tamin'ny Aprily 2012].
Nitatitra ny sampam-pahalalaham-baovao iraisampirenena fa farafahakeliny 65 ny isan'ny maty nanomboka tamin'ny 2011, na izany aza, mihevitra ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona fa mbola mavesatra kokoa ny isa.
Namoaka fanambarana manameloka ny fanafihana ny vondrona mpanohitra malaza Al Wefaq.
Nanantena ny Talen'ny Zon'olombelona Aloha Voalohany, Brian Dooley, fa hisy ny fisamborana kisendrasendra izay mateti-pitranga aorian'ny vaovao tahaka izao, ary nanasongadina ny tsy fisian'ny fahamarinana eo anivon'ny fitsarana Bahrainita nandritra ny taona maro lasa ihany koa izy.
“Indrisy fa afaka ora vitsivitsy, manantena hahita andiana fanambaran'ny governemanta milaza izay olona ahiahiana izahay, saingy ny lazan'ny mpitandro ny filaminana amin'ny lainga sy ny fanamboamboarana dia midika fa tsy hisy mihitsy ny fitsarana marina na dingana ara-pitsarana ara-dalàna ho an'ireo voasambotra. Avy eo izany dia hampizarazara kokoa ny firenena ary hitarika korontana goavana kokoa “
Mpanao gazety Bahrainita Nazeeha Saeed nitatitra ny fisamborana ireo mpaka sary fanao an-gazety minitra fohy taorian'ny fipoahana.
Fisamborana ireo mpitondra fiara sy moto maromaro tao amin'ny fisotroana kafe Costa, ao Karana, ka anisan'izany ireo mpakasary @Alshaikh_BH sy Ahmed Al-Fardan ary i Ahmed Riad Al-Qallaf #Bahrain
Notanana nandritra ny ora vitsy mba hanaovana fanadihadiana ireo mpakasary fanao an-gazety nihaodihaody tao amin'ny fivarotana kafe akaikin'ny toerana nitrangan'ny fipoahana ary avy eo navotsotra.
Matetika miafara amin'ny sazy fanamelohana ho faty ny raharaha tahaka ity na dia eo aza ny tabataban'ny iraisampirenena fa ao anatin'ny lisitra misy ireo firenena mamoaka sazy fanamelohana ho faty mifototra amin'ny fiaikena azo tamin'ny alalan'ny fampijaliana sy ny fikarakarana ratsy i Barhain.